बार्सिलोनाविरुद्ध अदालत जान सक्दिन : मेस्सी (अन्तरवार्ता) - Khelpati
शनिवार, भदौ २०, २०७७ खेलपाटी संवाददाता
एजेन्सी । अन्तत मेस्सी बार्सिलोनामै बस्न राजी भए । समकालिन फुटबल ईतिहासकै महान खेलाडीको रुपमा लिईने लियोनल मेस्सीको भविष्यलाई लिएर पछिल्ला दुई हप्ता अन्तराष्ट्रिय खेलकुद तरंगित बन्यो ।
च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा बायर्न म्युनिखसंग ८–२ ले बार्सिलोना पराजित बनेपछि मेस्सीले क्लब छाड्न चाहेको समाचार बाहिरिएको थियो । मेस्सी फ्याक्समार्फतनै क्लबलाई पत्र लेख्दै आफुलाई रिलिज गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
तर सम्झौताको बुँदालाई लिएर अर्जेन्टिनी फरवार्ड र क्लबको बोर्डबीच विवाद देखा पर्यो । मेस्सीले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार आफुलाई निशुल्क रिलिज गरिदिन अनुरोध गरे । क्लबले मेस्सीलाई निशुल्क छाड्न सकिने सम्झौताको शर्त गत जुनमै सकिएको उल्लेख गर्दै अर्जेन्टिनी फरवार्डलाई लैजान ७ सय मिलियन युरो तिर्नुपर्ने दाबी गर्यो ।
मेस्सी र उनको एजेन्ट समेत रहेका पिताले क्लब र बार्सिलोनाका अध्यक्षसंग भेट गरि अनावश्यक विवाद नझिक्न पटक पटक अनुरोध गरे । तर ला लिगा र बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेप मारिया बर्टोमेउ अडानबाट टसमस भएनन् । विवादको निरुपण अदालतबाट मात्र समाधान हुने अवस्था देखा पर्यो । क्लब छाड्न चाहेका मेस्सी क्लबबिरुद्ध अदालत जान भने मानेनन् । बार्सिलोनामा चित्त नबुझेपनि मेस्सी थप एक बर्ष बार्सिलोनमै बस्न तयार भए ।
जब मेस्सी बार्सिलोनामै बस्ने समाचार फुटबल सम्बन्धि अनलाईन गोल डटकमले प्रकाशित गर्यो । विश्व फुटबल पुन एक पटक तरंगित बन्यो । मेस्सी बार्सिलोनामै बस्ने भएपछि उनको बिषयलाई लिएर पछिल्ला दुई हप्तादेखि चलेका अनेकन आँकलनले फेल खाए ।
अन्तरवार्तामा मेस्सीले क्लब छाड्न चाहनुको कारण, बार्सिलोनामा भोग्नु परेका समस्याका बिषयमा खुलस्त कुराकानी गरेका छन् । जसलाई हामीले नेपाली अनुवाद गरेका छौ ।
तपाईंलाई सार्वजनिक रुपमा बोल्न किन समय लाग्यो ?
मेस्सी : लिस्बनमा पराजित भएपछिको अवस्था निकै कठिन थियो । बायर्न म्युनिखसंगको खेल हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने थाहा थियो । तर त्यो स्तरको कमजोर प्रदर्शन गर्छौ भन्ने लागेको थिएन । यसले सहर र क्लबलाई नै लज्जित गरायो ।
त्यो निकै लज्जास्पद प्रदर्शन थियो । त्यो हारपछि मलाई केही गर्नै मन थिएन । सबै कुरा स्पष्ट राख्न मलाई केही समय चाहिएको थियो ।
तपाईले किन बार्सिलोना छाड्न चाहेको बताउनु भयो ?
मेस्सी : मैले क्लब, क्लबका अध्यक्षलाई पनि क्लब छाड्न चाहेको बताएको थिए । मैले क्लब छाड्न चाहेको कुरा यो वर्षको सुरुवात देखिनै भनेको थिए ।
मलाई लाग्छ क्लबलाई धेरै भन्दा धेरै युवा खेलाडीको आवश्यकता छ । यहाँ मेरो समय सकिए जस्तो सोच्थे । मलाई दुःख लाग्छ, मैले यहीबाट सन्यास लिन्छु भनेको थिए ।
तर अवस्था राम्रो थिएन ।
मैदान, खेल र अभ्यासमा मैले धेरै दुःख भोगे । सबै कुरा मेरा लागि कठिन बन्दै थियो । यसले गर्दा मैले नयाँ लक्ष्यहरु लिनुपर्छ जस्तो लाग्यो ।
यो सोच बायर्न म्युनिखसंगको हारपछि आएको होइन । मैले यसबारे धेरै पहिलादेखि सोचिरहेको थिए । मैले यसबारे अध्यक्षलाई भन्दा सिजनको अन्त्यपछि मैले क्लब छाड्न सक्ने बताउँथे । तर उनले आफ्नो बोलीको बाचा पुरा गर्न सकेनन् ।
तपाईले बार्सिलोनामा एक्लो महसुस गर्नुभएको हो ?
मेस्सी : होइन, मैले यहाँ एक्लो महसुस गरेको छैन । यहाँ मेरा आफन्त छन्, उनीहरु सधैं मसँग नजिक छन् । उनीहरुको साथ मेरा लागि पर्याप्त छ र यसले मलाई हौसला दिन्छ ।
तर क्लबप्रतिको मेरो माया र प्रतिवद्धतामाथि यहाँका मानिस, पत्रकारले उठाएका प्रश्नले मलाई दुखी बनायो । मलाई लाग्छ, उनीहरुले मलाई लगाएका ती आक्षेपहरु मेरा लागि सुहाउँदैन् ।
फुटबलको दुनियाँ कठिनाईले भरिएको छ । यहाँ गलत प्रवृत्तिका मानिसहरु पनि छन् । अहिले जे भयो, यसले त्यस्ता गलत मानिस चिन्न सहयोग ग¥यो । क्लबप्रतिको मेरो मायाबारे गरिएको प्रश्न मेरो लागि सह्य थिएन । म यहाँ बसे पनि नबसेपनि बार्सिलोना प्रतिको मेरो माया कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन ।
तपाईका साथी, पैसा सबैको बारे कुरा गरिन्छ । बार्सिलोनामा २० वर्ष बसेपछि तपाईलाई सबैभन्दा दुखी कुन कुराले गरायो ?
मेस्सी : मेरा साथी, पैसा सबैको बारेमा जे हल्ला गरिएको छ, त्यसले मलाई ठेस पुगेको छ । मैले सधै सबैभन्दा क्लबलाई अगाडी राखेको छु । मैले धेरैपटक बार्सिलोना छाड्ने सम्भावना थियो । जुनसुकै वर्ष पनि मैले क्लब छाडेर यहाँ भन्दा धेरै कमाउने गरि नयाँ क्लब जान सक्थे । तर मैले त्यस्तो गरिन, किनकी बार्सिलोना मेरो घर हो ।
यहाँ भन्दा अरु ठाउँमा के राम्रो छ भनेर निर्णय गर्नु मेरो लागि कठिन थियो । तर मलाई नयाँ चुनौती अंगाल्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्दथ्यो ।
२० वर्षपछि आफ्नो घर, शहर, परिवार छाड्नु कठिन भएर तपाई बार्सिलोनामै बस्नु भएको हो ?
मेस्सी : मलाई निर्णय लिन निकै गा¥हो भयो । यहीबाट सन्यास लिनेछु भनेर मैले सधैं भन्ने गर्दथे । मलाई सधै क्लबका लागि उपाधी जित्न मन छ, उपाधि जित्ने परियोजना चाहिएको थियो ।
सत्य के हो भने, बार्सिलोनामा अब जित्ने परियोजनानै छैन । क्लबका पदाधिकारीहरु आफ्नो गल्ती ढाकछोप मात्र गर्न चाहन्छन् । मैले भनिसके, मैले क्लब र मेरो परिवारको हितका लागि नै क्लब छाड्न चाहन्थे ।
क्लब छाड्न चाहेको कुरा भन्दा परिवारको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ?
मेस्सी : मैले क्लब छाड्न चाहेको कुरा परिवारमा सुनाए पछिको अवस्था निकै भावनात्मक थियो । परिवारका सबै सदस्य रोएका थिए । उनीहरु यो सहर छाड्न चाहदैनथे । छोराहरु आफ्नो विद्यालय छाड्न चाहन्नथे ।
मैले टाढाका सोचँ राखेको थिए । म उच्च प्रतियोगिता चाहन्थे । उपाधी जित्न र सबैभन्दा महत्वपूर्ण च्याम्पियन्स लिग जित्न चाहन्थे । यसमा हार, जित त हुन्छ तर कडा प्रतिस्पर्धा भने दिनै पर्छ । रोम, लिभरपुल, लिस्बनमा जस्तै कमजोर प्रस्तुत हुनुहुदैन ।
मैले भनिसकें म क्लब छाड्न चाहन्थे । जतिबेला चाहेपनि छाड्न सक्ने कुरा अध्यक्ष स्वयमले भनेका थिए । तर अहिले अध्यक्षले जुन १० अगाडीनै भन्नुपर्दथ्यो भन्दै छन् । त्यसबेला हामी ला लिगामा प्रतिस्पर्धा गर्दै थियौ ।
कुनै पनि क्लबलाई मेरो रिलिज क्लज तिर्नु असम्भव छ । ७ सय मिलियन तिरेर मात्र क्लब छाड्न सक्ने अध्यक्षको अडान थियो । म क्लबमै बस्नुको कारण यहि हो ।
मसँग अदालत जान सक्ने अर्को तरिका थियो । तर म कहिल्यै पनि बार्सिलोनाको विरुद्ध अदालत जान सक्दिन । यो क्लबलाई म माया गर्छु, सम्मान गर्छु । क्लबले मलाई सबैकुरा दिएको छु र मैले पनि फिर्ता दिएको छु ।
क्लब प्रतिको तपाईंको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठ्दा दुख लाग्यो ?
मेस्सी : यसले मलाई पक्कै दुख लाग्यो । मेरो बारे गलत प्रचार गरिए । उनीहरुले म क्लबलाई अदालतसम्म लैजान सक्छु भन्ने सोच्नु नै दुखदायी छ । म कहिल्यै त्यस्तो गर्न सक्दिँन । म क्लब छाड्न चाहन्थे किनकी म मेरो अन्तिम वर्षहरु सुखदायी रुपमा बिताउन चाहन्थे । विगत केही समयदेखि मैले यस क्लबमा सुख भोगेको छैन ।
तपाईं अझै क्लबको नेतृत्व सम्हाल्नु हुनेछ । अब बार्सिलोनामा केही परिवर्तन त आवश्यक होला नि ?
मेस्सी : म बार्सिलोनालाई नै निरन्तरता दिनेछु । मैले क्लब छाड्न चाहेको भएपनि मैदानमा मेरो सिद्धान्त परिवर्तन हुने छैन । म मेरो उत्कृष्ट प्रदर्शन दिनेछु ।
म सधैं जित्न चाहन्छु । म प्रतिस्पर्धात्मक छु, केही हार्न चाहन्न । मैले सधैं क्लब, ड्रेसिङ रुम र स्वयमका लागि राम्रो चाहेको छु । मैले सधैं च्याम्पियन्स लिग जित्न साथ पाएन भन्ने गर्दथे । अहिले मलाई थाहा छैन के हुन्छ । नयाँ प्रशिक्षक र नयाँ विचार छन्, हेरौ के हुन्छ । म के मात्र भन्न सक्छु भने म क्लबका लागि सकेजती गर्नेछु ।
तपाईले क्लब छाड्नुहुन्छ भनेर हल्ला गर्ने धेरै थिए, त्यस्ता हल्ला सुन्दा तपाईले सुरुमा के सोच्नु भयो ?
मेस्सी : म क्लबप्रति सदैव सम्मान गर्छु । क्लब छाड्छु भनेर मैले नभन्दै अरुले हल्ला गरेको देख्दा आघात पुग्यो । मैले बार्सिलोनालाई माया गर्छु, यो भन्दा राम्रो ठाउँ पाउनै सक्दिन । अहिले क्लब छाडेर गएपनि, पछि म यही फर्कन सक्थे ।
मेरा छोराहरु, मेरो परिवार सबै यही हुर्कियौ । क्लब छाड्न चाहनुमा कुनै गलत थिएन । यो मेरो लागि, क्लबका लागि र सबैका लागि सकारात्मक थियो ।
यसले तपाईको परिवारलाई कस्तो प्रभाव पार्यो ?
मेस्सी : यो सबैका लागि गाह्रो समय थियो । मेरी श्रीमतीले मनमा दुख भएपनि मलाई साथ दिइन् ।
परिवारका महत्वपूर्ण सदस्य माटियो हुन नि ।
(हाँस्दै) माटियो अझै साना छन् । उनलाई ठाउँ छाडेर नयाँ ठाउँमा आफ्नो जीवन बसाल्नुले कस्तो प्रभाव पर्छ थाहा छैन । थिएगोले बुझ्दछन् । उनले समाचार देखेर थाहा पाएछन् । उनलाई केही थाहा नहोस् भन्ने चाहन्थें । उनले थाहा पाएपछि रुँदै कतै नजाऔँ भनेका थिए । यो अवस्था निकै गाह्रो थियो । तर मैले यो बुझ्नु पर्दथ्यो । मैले पनि यहि अवस्था भोगेको थिए र मलाई थाहा छ, निर्णय लिन निकै कठिन हुन्छ ।
बार्सिलोनाका समर्थकलाई केही सन्देश ?
मेस्सी : सधै झै म यस वर्ष पनि आफ्नो सकेजति उत्कृष्ट प्रदर्शन दिनेछु । लक्ष्य हासिल गर्न खटिने छु । मैले यो सिजन कठिनाई पूर्ण बिताउनु प¥यो । तर कोरोनाका कारण आफन्त गुमाएकाको अगाडी मेरो कठिनाई केही होइन । मलाई आशा छ, मैले आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन दिएर उपाधी जित्ने छौं । ती जित म कोरोनाका कारण आफन्त गुमाएकालाई समर्पण गर्नेछु ।
तपाईले जानकारी दिन फ्याक्स नै किन गर्नुप¥यो ?
मेस्सी : मैले यसलाई आधिकारिक गराउनका लागि नै फ्याक्स गरेको हु । मैले एक वर्षदेखि नै क्लब छाड्न चाहेको अध्यक्षलाई जानकारी दिएको थिए । उनले पछि कुरा गरौला भन्दै टारिदिए ।
मैले फ्याक्स गरेर कुनै झन्झट बढाउन चाहेको थिइन । म यसलाई आधिकारिक गराउन चाहन्थें । म मेरो निर्णय सबैलाई आधिकारिक रुपमै जानकारी गराउन चाहन्थें ।
तपाईले फ्याक्स नगरेको भए तपाईको कुरा सुनिदैनथ्यो भन्ने पो लागेको थियो कि ?
मेस्सी : एकदमै । मैले यदि फ्याक्स नगरेको भए उनीहरुलाई केही नभए झै लाग्न सक्दथ्यो । मेरो सम्झौतामा एक वर्षे ऐच्छिक अवधि थियो, जुनलाई म पूरा गर्नुपर्दथ्यो ।
तर त्यो उपाय अपनाउन जुन १० अघिनै भन्नु पर्दथ्यो भन्ने कुरा अहिले बोर्डले उठाईरहेको छ । त्यति बेला हामी प्रतिस्पर्धानै गर्दै थियौं । अध्यक्षलाई मैले धेरैपटक भन्दा पनि नसुनेपछि यसलाई आधिकारिक गराउननै मैले फ्याक्सको बाटो प्रयोग गर्नुप¥यो किनकी म क्लबसँग कुनै द्वन्द्व चाहन्न ।
'नराम्रो भन्नेको बोली बन्द पार्न सफल भए'
सुदूरपश्चिम स्पोर्टस अवार्ड : अर्पण, पुनम र संगीता युवा वर्ष खेलाडीको मनोनयनमा
बागमतीको लगातार दोस्रो हार
म्यानचेस्टर डर्बी आज
प्रगतिशील युवा क्लब च्याम्पियन
बाँसबारीविरुद्ध झम्सिखेल (लाईभ) स्थानः समयः